Diyaaradaha Yahuuda Oo Duqeeyay Magaalada Gaza. – Calamada.com
Diyaaradaha Yahuuda Oo Duqeeyay Magaalada Gaza.
calamada August 22, 2016 1 min read
Afar ruux oo Filastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda ay shalay gelinkii dambe duqeeyeen magaalada Gaza ee dhulka Filastiiniyiinta.
Afhayeenka Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Xamaas ee Jiidda Gaza Ashraf Al-Qudrah ayaa sheegay in Isbitaallada la gaarsiiyay dhaawacyada dhowr ruux oo ay Caruur ku jiraan oo ku dhaawacay duqeyntaasi.
Ilo wareedyo ayaa sheegay in diyaaradaha Yahuudda ay Afar weerar ku qaadeen Xarumo Meliteri oo ay leeyihiin qaar ka tirsan Ururada Muqaawamda Filastiiniyiinta, sida Guutada Al-Qassaam ee garabka Meliteri ee Ururka Xammaas iyo Guutada Saraayaa Al-Qudus.
Duqeyn kale oo Shanaad ayaa waxay ka dhacday dhul beereed kuyaalla Xerada Al-Bariij ee bartamaha Jiidda Gaza ee dhulka Filastiin. Sidoo kale Ciidamada dhulka Yahuudda ayaa dhankooda waxay madaafiic ku garaaceen deegaannada kuyaalla xadka Jiidda Gaza, waxaana lagu soo warramayaa inay halkaas ku garaaceen inkabadan Labaatan Madfac, iydoo aan lasoo sheegin cid wax ku noqotay.
Dhinaca kalena Afhayeenka Ciidamada Meliteriga Yahuudda Gaalka lagu magacaabo Afiikhaay Adraci ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka iyo Ciidamada dhulka ee Yahuudda inay jawaab celin u ahaayeen Weerar Sawaariikh ah oo Kooxaha Filastiiniyiintu ay kusoo qaadeen deegaanka lagu magacaabo Sadayruut ee Yahuuddu ay xoogga ku heystaan.
Kooxaha Muqaawamada Filastiiniyiinta ayaa weerarro joogto ah waxay ku qaadaan magaalooyinka ay Yahuuddu xoogga ku heystaan ee kuyaalla Soodhinta Jiidda Gaza, iyadoona diyaaradaha dagaalka ee Sahyuuniyaddu ay dhankooda fuliyaan duqeymo ay kaga jawaabayaan weeraradaasi.
Previous: Faahfaahino Laga Helayo Madaafiicda Lagu Garaacay Wazaarada Gaadiidka.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 19-11-1437 Hijri.